Bucknackt's Sordid Tawdry Blog: Akhyaarey Kuwani Jeceshahay Trump. Ilaa waxay Friend lagu sii qaaday. 27FEB17
Akhyaarey Kuwani Jeceshahay Trump. Ilaa waxay Friend lagu sii qaaday. 27FEB17
THIS ka + Mother Jones waxaa oo dhan ayaa sheegay in .... Just sugaan ilaa dadkan furo caymiska caafimaadka ay !!!!!
Akhyaarey Kuwani Jeceshahay Trump. Ilaa waxay Friend lagu sii qaaday.
bulshada A in ay taageerayaan Trump arkaa mid ka mid ah xubnihiisa qiimeeyeen xiray weerar Trump ah iyo yaabab, waxa kaliya dhacay?
TOM PHILPOTT JAN. 27, 2017 7:06 PM
In Monday a piece , The New York Times kor u adeegeen mid ka mid ah conundrums of Trumpism xeedho, wux- sida taallo ciid ah oo kaliya-gubay of fajitas. Dhinaca mid ....
Juan Carlos Hernandez Pacheco - Carlos oo kaliya in ay dadka West Frankfort - ayaa tababare ee La Fiesta, makhaayad Mexico magaaladan ee 8000, muddo toban sano ah. Haa, mar walba uu salaamay dadka diiran makhaayad ku faraxsan qurxiyey, caan ku ah lo'da iyo digaag fajitas ay. ... [O] habeenkii ne dayrta la soo dhaafay, marka Waaxda Dabka la dagaalamaya dabka laba-alarm ah, Mr. Hernandez si lama filaan ah u muuqday la cunto damiyayaasha. Sidee ayuu u marti Maalin Mahadnaqa Law Enforcement makhaayad xagaagii hore sida askari oo bilays ah ayaa lagu naqdiyay dalka ku baahsan. Sidee ayuu ka qayb qaatay oo kaliya oo ku saabsan guddiga bulshada kasta ama dadaal samafal - Club Rotary ah, kansarka fund-raisers, maalmood nadiifinta, xataa deeq Redbirds ah, kooxaha ciyaaraha dugsiga sare, kuwaas oo kibirka magaaladan.
Dhinaca kale waxaa:
Weydii dadka degan this laysaan dhuxul-macdanta ah oo ku saabsan go'aanka Madaxweynaha Trump ee in la qab qabto on muhaajiriinta aan sharciga lahayn iyo ugu bixiyaan dibad lahayn. Mr. Trump, kuwaas oo si fudud ku badisay this gobolka Illinois koonfurta inta cad, waxaa samaynayaan wixii uu u ballanqaaday, waxay is-odhan. Sida Terry Chambers, rayiislaha on Main Street, waa inuu ku shubaa, madaxweynaha rabo "in laga takhaluso oo ka mid ah ukunta xun."
Carlos, tiirkii jecel yahay ee bulshada, ayaa dhawaan helay soo gaaray weerar socdaalka. Haddaba qaar ka mid ah muwaadiniinta upstanding of West Frankfort, Ill., Waa flummoxed.
"Waxaan qabaa in dadku u baahan yihiin in ay wax u qabtaan sida saxda ah, raac xeerarka oo Adeeca sharciyada, iyo waxaan si adag u aaminsan yihiin in," ayuu yiri Lori Barron, milkiilaha Lori ee Timaha A'Fairs, qurxinta dumarka ah. "Laakiin in ay dhacdo Carlos, waxaan u maleynayaa inuu ku samaysay laga yaabaa in badan oo dad badan halkan meeshan abid isaga laga siiyey. Waxaan qabaa in gabi ahaanba laga cabsado in uu la qaadi karaan."
Anigu ma aan ka fikiri kartaa sawir ka badan oo waxbaridda ee siyaasadda ajinebiga Trump ee: demonize, hound, iyo marka ay suurtogal tahay, iyo raajiso ah dadka aad yaa inaga quudiyaan. Ka hor inta Trump la sameeyo, waxaan beensheegayaal ahayna ma in Americans badan oo dheeraad ah waxa uu dareemayaa dhacdhaco hadda lagu xaaqayo West Frankfort.
Tom Philpott waa Wariyaha cuntada iyo ag ee Mother Jones . Waxa uu la gaaray karaa tphilpott@motherjones.com, ama on Twitter at @tomphilpott.
2016 mideynta dareenka doorashada , tarxiilka , drumpf / buunka-dinaar , Munaafaqnimada , ICE ,soo galootiga , Juan Carlos Hernandez Pacheco , La Fiesta , waddaniyadda , midab , muhaajiriinta aan sharciga lahayn , West Frankfort IL , naceeb